Mogadishu Journal » Ra’iisul Wasaaraha oo kormeeray dhaawacyada Ciidamada ee ku jira Isbitaalka Xoogga
Ra’iisul Wasaaraha oo kormeeray dhaawacyada Ciidamada ee ku jira Isbitaalka Xoogga
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay kormeeray Isbitaalka Xoogga dalka oo ay ku jiraan dhaawacyada Ciidamada, kuwaasoo ku soo dhaawacmay dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay qeybo ka mid ah dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa mid mid u dul tagay Ciidamada dhaawacyada, isagoo ka dhageystay xaaladooda, waxaana uu qiimeeyay xaalada daryeelka caafimaad ee ay helaan.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay maamulka Guud ee Isbitaalka, hannaanka shaqo ee Isbitaalka, iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada uu ugu yimid Ra’iisul Wasaaraha.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaaraha ayaa caafimaad u rajjeeyay dhaawacyada askarta, isagoo boggaadiyay kaalinta ay ka qaateen maamulka iyo dhaqaatiirta Isbitaalka Xoogga baxnaaninta iyo la tacaalida xaalada caafimaad ee askarta ku dhaawacantay dagaalada ee ku jira Isbitaalka.
Amiirka Al Shabaab oo ka hadlay arimo Xasaasi ah oo ay kamid tahay Muranka Badda